Fanalan-jaza eto Madagasikara: Misy ny atrikasa hananganana tambazotra hanalalahana azy
Antony faharoa mahatonga ny fahafahatesan’ny reny eo am-piterahana ny fanalan-jaza tsy voaaro, aorian’ny fandehanan-drà be loatra sy mialoha sy aorian’ny fiterahana. Manodidina ny 75.000 isan-taona, nefa ny fanalan-jaza eto Madagasikara tamin’ny taona 2017,
araka ny tarehimarika nomen’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka araka ny tarehimarika tombana nivoaka ny taona 2008, nomen’ny “Observatoire des droits de l’enfant pour la region Océan Indien” na ODEROI. Noho izany rehetra izany dia nohamafisina ny lalàna mifehy ny fanalan-jaza eto Madagasikara. Sokajiana ho heloka bevava mihitsy ny fanalan-jaza na taorian’ny fanolanana aza ary mety hiteraka olana goavana eo amin’ilay reny ny fanohizana ilay vohoka dia samy voasazin’io lalàna io avokoa. Entina indrindra hanalalahana io fahafahana manala zaza eto Madagasikara io dia misy ny atrikasa tanterahin’ny hetsika “Nifin’Akanga” etsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina nanomboka omaly ka aharitra telo andro. Mandray anjara ao anatin’izany ireo mpisehatra ho an’ny zon’ny vehivavy sy ny zo hisafidy miisa 35 avy amin’ny faritra enina eto Madagasikara izay samy resy lahatra tanteraka amin’ny maha zava-dehibe ny zon’ny tsirairay sy ny fahasalamana ara-pananahana ary ny fahafahan’ny vehivavy hanao izay tiany amin’ny vatany. Aorian’izao atrikasa izao dia hisy ny fifanarahana izay ho soniavin’ireo mpandray anjara ka hametrahana ny tambazotra nasionaly ho an’ny fanalalahana ny fanalan-jaza eto Madagasikara. Izany dia entin’izy ireo hanehoana ny firotsahany ao anatin’ny ady ho an’ny fanajana ny zon’ny vehivavy.